Faah Faahin:- Qaraxyadii maanta ka dhacay waqooyiga Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah Faahin:- Qaraxyadii maanta ka dhacay waqooyiga Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug (SAWIRO)
Waxaa faah faahino dheeraad ah laga helayaa laba qarax oo aad u waaweyn oo maanta ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, gaar ahaan xarunta dowladda hoose ee maamulka Puntland.
Qaraxyadaasi oo ahaa kuwa loo adeegsaday gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa midka koowaad waxa uu ku qarxay afaafka hore ee xarunta dowladda hoose ee Puntland oo ku taala waqooyiga magaalada Gaalkacyo, waxaana qaraxaasi sidoo kale xigay rasaas iyo qarax kale oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo isla goobta meel u dhaw ku qarxay.
Kooxda weerarka ku qaaday xarunta dowladda hoose ee maamulka Puntland ayaa gudaha u galay xaruntaasi, waxaana ay iska-horimaad kooban kala kulmeen ciidanka dowladda Puntland oo amniga goobtaasi sugayay.
Muddo 10 daqiiqo kadib ayaa hadane waxaa dhacay qarax kale oo loo adeegsaday gaari noociisu ahaa NOHA, kaas oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa islamarkaana lasoo dhigay agagaarka xarunta dowladda hoose ee Puntland.
Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxyadaasi ku geeriyootay in ka badan 20 qof, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay tiro ka badan 30 qof.
Dadka badanaa qaraxyadaasi waxyeeladda kasoo gaartay ayaa sida la sheegay ahaa dadkii kusoo yaacay qaraxii koowaad, waxayna dadkaasi isugu jireen dad shacab ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland.
Dhaawacyadda ayaa sida la sheegay la geeyay goobaha caafimaad ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Ciidamo isugu jiray kuwa nabad-sugidda maamulka Puntland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee DANAB oo sida gaarka ah u tababaran ayaa goobtaasi gaaray, waxaana markii dambe suurto gashay in ciidankaasi ay soo afjaraan weerarka.
Kooxihii weerarka soo qaaday ayaa dhamaantood la wada toogtay, waxaana goobta uu weerarka ka dhacay haatan ku sugan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee DANAB iyo sidoo kale ciidanka nabad-sugidda maamulka Puntland.
Dhinaca kale, warbaahinta taageerta Xarakada Al-shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay iyaga ka dambeeyeen islamarkaana ay dileen askar badan oo ka tirsan kuwa Puntland.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxyadda maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa kusoo beegmaya xilli muddo todobaad laga joogo ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee DANAB iyo kuwa maamulka Puntland howlgalo ay ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo lagu soo qab-qabtay rag ka tirsan Xarakada Al-shabaab oo qaarkood la sheegay inay ahaayeen dad ajaanib ah.
Turkey opens Somalia’s first health science graduate school